ကိုရိုနာကြောင့် လက်ထပ်ပွဲပေါင်း ၁ သိန်း ၇ သောင်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရ !!! - JAPO Japanese News
ဟူး 05 Aug 2020, 15:39 ညနေ
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ ကိုရိုနာဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ စီးပွားရေးကိုသာထိခိုက်သွားတာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်‌တော်တို့မသိသေးတဲ့ သတို့သားလောင်း သတို့သမီးလောင်းတွေကိုပါ အကြီးအကျယ် သက်ရောက်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပရာ နေရာတွေကိုလေ့လာတွက်ချက်ခြင်းအရ ၃ လပိုင်းကနေ လာမယ့်လအထိ ရွေ့ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ လက်ထပ်ပွဲပေါင်း ခန့်မှန်းချေ 170000 လောက်ရှိပြီး၊ ဒီမင်္ဂလာဆောင် အေဂျင်စီလုပ်ငန်းမှာပဲ တစ်နိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးအရ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာက 600 billion ယန်းလောက်ရှိလာကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။
နှစ်စဥ် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့အတွဲပေါင်း ပျမ်းမျှ ၃ သိန်းခန့်ရှိရာ ထိုအရေအတွက် ရဲ့ထက်ဝက်အထိ သက်ရောက်မှုရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်သတို့သမီးယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်းကလည်း “ ရောဂါပြန့်ပွားလာမှုမှာ စီးပွားရေးအရ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုက ခန့်မှန်းထားတာထက်ကိုပိုများနေပါတယ်။ အခမ်းအနားကို livestream နဲ့ကျင်းပနိုင်မယ့်ပုံစံအသစ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်သွားမယ်… ဇနီးမောင်နှံလောင်းတို့ရဲ့ သဘောထားနဲ့လိုက်ပြီး ဒီလုပ်ငန်းကိုပြန်ပြီးလည်ပတ်စေချင်တယ်” လို့ပြောပါတယ်။
“ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပွဲဆိုတာကတော့ ချစ်သူနှစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မေတ္တာရှိပြီး သေအတူသက်တစ်ဆုံး ရိုးမြေကျ ဒီတစ်ယောက်ကိုပဲလက်တွဲပေါင်းသင်းသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် မင်္ဂလာရှိတဲ့ရက်မြတ်ကိုသတ်မှတ်ကာ လူတွေအရှေ့မှာ ဂတိသစ္စာဆိုတဲ့ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ……..”
ဒီအတွက် ကိုရိုနာကြောင့်နဲ့ လက်ထပ်ပွဲကိုမရပ်တန့်လိုက်စေချင်သူများလည်းရှိပါတယ်။
ဂျပန်မှာရှိတဲ့ Wedding production company 「アールキューブ」 R Cube, ဟာ မင်္ဂလာပွဲရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့စုံတွဲတွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပုံစံအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဝန်ဆောင်မှုမှာ မိမိရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အလုပ်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပူးပေါင်းပြီး မင်္ဂလာပွဲရဲ့ကုန်ကျစာရိတ်ကို “ ခွဲဝေရှင်းပေး” တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ မင်္ဂလာမောင်နှံနှစ်ဦး အခမ်းအနားအတွက်ကုန်ကျမယ့် ယန်း ၁ သိန်း ၄ သောင်းမှာ၊ လူ ၂၀ ကလာရောက်ပူးပေါင်းပေးမယ်ဆို တစ်ဦးကို ၇၀၀၀ ယန်းနဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို လက်ဖွဲ့ပေးနိုင်တဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကုန်ကျမှုမှာ မင်္ဂလာပွဲဝတ်စုံ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ မိတ်ကပ်ဆံပင်၊ ဓါတ်ပုံ စတဲ့အသုံးစာရိတ်တွေအားလုံးပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီကလည်း credit card နဲ့ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် အလုပ်လက်ဝင်ခြင်းလည်းသက်သာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒီဝန်ဆောင်မှုအသစ်မှာ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့မင်္ဂလာပွဲကို ပြန်လည်ကျင်းပဖို့ အားတက်လာတဲ့အတွဲလည်းရှိပါတယ်။
Chiba ခရိုင်မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ်အတွဲဟာ မနှစ်က နှစ်ကုန်ခါနီးမှာ စာရင်းသွင်းထားတာဖြစ်ပြီး၊
၂ ဦးသားစပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ လမှာပဲ လက်ထပ်ကြမယ်လိုဆုံးဖြတ်ပြီး ၆ လပိုင်းမှာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ်လို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သတို့သမီးဖြစ်တဲ့ Marie ဆိုသူကလည်း ၄ လပိုင်းလောက်မှာ မိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ဖိတ်စာတွေ ဝေမယ်ဆိုပြီးကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ကိုရိုနာရဲ့ပျံ့နှံ့လာမှုကြောင့် မင်္ဂလာပွဲဖျက်လိုက်ရပါတယ်။
Marie စံတစ်ယောက် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မှာတော့ ကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့နေရာအထိ ရထားနဲ့သွားပြီး၊ အထိမ်းအမှတ်နေ့စွဲလက်မှတ်လေးကို သေသေချာချာလေးထိန်းသိမ်းခဲ့ပေမဲ့၊ ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်တောင် မရခဲ့ရှာပါဘူး။
Marie စံ နဲ့အတူ မိသားစုဟာလည်း ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာ သတို့သားရဲ့ဆွေမျိုးတွေကနေ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကိုအသုံးပြုပြီး သူတို့ ၂ ဦးအတွက် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုလက်ဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
online meeting နဲ့ပဲနေရာတွေကိုရွေးကာ အဲ့ဒီနေ့လုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေကိုဆွေးနွေးပြီး ယခင်လ ၆ ရက်နေ့မှာပဲ ရွေးချယ်ထားခဲ့တဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံကိုလည်း Fitting ချပြီးစီးခဲ့ပါပြီး….
Marie စံက “ မင်္ဂလာပွဲဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီလိုလက်ဆောင်အစီအစဥ်နဲ့ ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ စာရင်းသွင်းပြီးကတည်းက နှစ်တစ်ဝက်လောက်ရှိသွားပေမဲ့၊ နောက်ဆုံးတော့ ဒီနေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီး။ အဖေနဲ့အမေကို သတို့သမီးဝတ်စုံသေချာပေါက် မြင်စေချင်တယ်” လို့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်ကာလရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီး ဒီလက်ဆောင်အစီအစဥ်က မင်္ဂလာမောင်နှံတို့အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့အစီအစဥ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်မိပါတယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တန်ဖိုးထားပြီး ဘဝတစ်ခုကိုအစပြုသွားမယ့် အဲ့ဒီနေ့လေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။…..